Soomaali loo heysto Burcad-badeednimo oo ka soo Muuqanaya…
Maxkamadeynta shan qof oo soomaali ah kuwaas oo loogu shakinsan yahay Burcad badeednimo ayaa 30 Aug ka bilaaban doonto Maxkamada sare ee Seychelles.
Muwaadiniinta ayaa waxaa seychelles ku wareejisay Howgalka midowga Yurub ee La dagaalanka Burcad badeed april sanadkii hore sida ay warisay wakaalada wararka ee jaziirada Seychelles.
Eedeesanayaasha ayaa soo muuqday ka hor inta aanu garsoore Gustave Dodin oo Maxkamada sare ka tirsan aanu ku wargalin in maxkamadeyntooda ay socon doonto Muddo afar asbuuc ah.
Sida laga soo xigtay Waaxda Arimaha dibada ee Howlgalka Midowga Yurub ee la dagaalanka Burcad badeedka EU NAVFOR ayaa waxaa ay shanta Tuhmane ku wareejiyeen Seychelles kadib Markii ay ka jawaabeen weeraradii Burcad badeed ee dhacay 21 april sanadkii hore.
Wakaalada wararka ee seychelles ayaa tabisay in eedeesanayaashan oo lagu qaaday markab uu ku xirnaa Calanka spain lagu wareejiye seychelles loona cuskaday heshiis dhex maray Midowga yurub iyo seychelles.
Howgalka oo shantan nin Gacanta ku dhigay ayaa waxaa ay sheegeen in eedeesanayaasha ay 19 Bishii april sanadkii hore ay qabsadeen Dooni laga lahaa wadanka yeman,labo maalmood kadib ayay sidoo kale sheegeen in ay Burcadani weerareen Markab kaluumeysi oo laga leeyahay kuuriya lana yiraahdo Adria,markabkaas oo badweynta hindiya u jiray 280 Meyl-badeed taasoo ka baxsan xeebta Soomaaliya.
Marki ay ahayd 23 April, Markabka Ciidan ee Esps Navarra kasoo oo qayb ka ah howl galka ayaa ku guulestay in dib usoo qabtaan markab ay burcada qabsadeen iyo shantan oo lagu tuhunsan yahya in howlgalkii doonyahaas lagu qafaalanaye qayb ka ahaayeen.
Ciidamada la dagaalanka burcad badeed ayaa waxaa ay sheegeen in dhacdadani ay tahay tii ugu horeysay ee burcad badeednimo tan iyo October 2018-dii.
“Dhacdadan waxay si cad u muujineysaa in burcad badeednimada iyo dhaca hubeysan ee ka dhaca xeebaha Soomaaliya, aan la ciribtirin wali”. Ayuu yiir Taliyaha howlgalka Rear Admiral Antonio Martorell.
Wuxuu intaas ku daray “baahida loo qabo joogitaanka amniga badaha ee aagga Khatarta sare wali waxay muhiim u tahay xakamaynta iyo ka hortagga shilalka mustaqbalka iyo weerarada.”
Marka laga soo tago shanta Soomaalida ah ee sugaya in maxkamad la soo taago, waxaa jira hal muwaadin Soomaali ah oo ku jira xabsi ku yaal Seychelles.
Seychelles Jaziirada ku taal Galbeed Badweynta Hindiya,Dhinaca barina ka xigta Xeebaha soomaaliya ayaa waxaa qayb weyn ka qaadataa Howgalka lagu dagaalamayo Shufto badeedka tan iyo sanadkii 2005-kii.
Waxaa lagu xukumay Soomaali badan kuwaas oo Burcad badeednimo loo heysto balse wadankan dadka lagu xukumo qaarkood Wadanka ayaa la keenay Si Xukunkoodu ay u dhameestaan.